Mabhachi echando, Sweatshirts, Sweatshorts - Dufiest
Ningbo Dufiest ndomumwe wevatungamiriri vepamberi mukugadzirwa, mhando uye chigadzirwa kugadzirwa muindasitiri yemitambo yemitambo. Yakavambwa muna 2006, isu tine anopfuura makore gumi nemashanu 'mune iyi yakamisikidzwa. Pakutanga 5years, isu tinopa OEM sevhisi kune vatengi vedu, isu tobva tatanga kuwana dhizaini dhipatimendi muna 2012 uye Yedu yekuumba kugona inowedzera kukura kusvika ikozvino. Tinoda kupa yazvino fashoni Sportswears kune vedu vatengi, zvakadai se: Track bhachi, track pasi, T-shati, sweatshirt, Pullover, zip-up Bhachi, sweatshorts, beach pfupi, slimfit nezvimwe kubva kumatare akasarudzwa, grey jira kuruka / kuruka , kune yekudhaya, kudhinda uye embroidery maitiro.
Dufiest Sports yakura kuita Premier ISO9001: 2008, GRS inosimbiswa Mugadziri weYakakwira mhando, zvinodhura zvigadzirwa.
Nyanzvi yekugadzira Sportswear, sweatshirts hoodie uye masuti ekupfeka angangoita gumi neshanu fekitori.edu fekitori iri muCixi guta riri parutivi rwakanaka Hangzhou bay！
Yedu inotungamira chigadzirwa Sehr viel
Unza kwakawanda kufamba kuti utitsvagire isu uye nekushandisa sevhisi yedu kuva mari inobatsira kwazvo mune ramangwana rako.
Tanga Bhizinesi Rako
Nemhepo Tsika Oem Fashoni Shambira Adult Sexy M ...
Iwo mahombekombe emahombekombe isarudzo inopisa pakati pevanhu pavanenge vari parwendo rwekumahombekombe kana kumba uye vachitengeswa nesu pamutengo wevatengesi. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track ...
Mahombekombe egungwa varume vasina mvura bhodhi zvikabudura zvisina chinhu ...
Kana dzikapfekwa sutu yekugezesa, hunde dzinowanzo shamiswa semiti yekushambira kana zvigunha zvekugezesa (kana neyakajairika izwi rekugezesa sutu kana zvakafanana) uye kazhinji ipfupi pane bhodhi zvikabudura, zvinosvika kumabvi. mukati mehomwe yekushambira ndeyokupa rutsigiro kunhengo dzesikarudzi apo uchishambira. Iyo mambure inombundira nhengo dzepabonde padyo nemuviri nenzira yakafanana neyepfupi-yemukati yemukati. Izvi zvinovadzivirira kubva munzira yekukuvara panguva yekurovedza muviri ...
Yakasarudzika Logo French French Terry Plain Hoodies Varume
Iro zita rinobva kuna 'Loopwheel', yechinyakare kuruka muchina uyo waimbove wakashandiswa kuruka jira. … Kuva nezvishwe kumashure kweshinda kwakatanga kugadzirirwa kuti sweatshirt ipinze ziya kubva mumuviri wako woipfuudza muhembe kuti urambe uchitonhorera. Sweatshirt inogadzirwa nekotoni inorema. Masweat akaitirwa kuti ugare uchidziirwa munguva yechando. Sweatshirt inorevawo kuti urambe uchidziya, kunyange hachisi icho chete chinangwa. Pamwe chete kee ...
cationic jira track bhachi zipi hoodie ye ...
Iyo track yekunze kusakara inodziya kwazvo uye yakasununguka kune ese maviri mafambiro uye kukwira uye inotengeswa nesu mutengesi yewose mutengo. Isu tiri vega vanogadzira uye vanotengesa mbatya dzemitambo kubva kuChina. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo iri yega inogadzira kubva kuChina, gadzira, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, trac ...
Iyo track zipper hoodie yakanyanya fashoni uye yakagadzikana kune ese ari maviri imba nekufamba uye inotengeswa nesu kwazvose mutengo. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yega inogadzira kubva kuChina, gadzira, kunze uye fekitori yemitambo, hoodies, track ja ...
Evanhu Polar nemvere bhachi track pamwe mutsetse ...
Iyo track track yechando bhachi inodziya kwazvo uye yakasununguka kune ese ari maviri imba nekufamba uye inotengeswa nesu patenga resesaja. Isu tiri vega mugadziri uye mutengesi wemitambo kubva kuChina. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track ...
Tracksuit chinyorwa chekupfeka chinosanganisira zvikamu zviviri: bhurugwa nejaketi kazhinji zvine zipi yepamberi. Yakanga yakagadzirirwa kuitirwa mumitambo, kunyanya kune vatambi kupfeka zvipfeko zvemakwikwi (senge kumhanya hembe uye zvikabudura kana swimsuit) uye kubvisa pamberi pemakwikwi. Yakakura yekurongedza uye kudziya mukati memazuva anotonhora echirimo / zhizha, bhachi revatambi revarume rine mashandisiro akati wandei (kunze kwekungova chinhu chikuru chemafashoni) icho chaungangodaro usati ...
cationic jira kukodzera zipi bhachi vakadzi vakadzi zvaiti ...
Idzo nyowani dhizaini
yevatengi Sehr viel
Idzo nyowani dhizaini yemahombekombe mashopu, sweatshirts hoodie, pamwe ne zip-up bhachi. Huya uone kuti ndechipi chinhu chinokodzera misika yako - isu tichafara kuwana zvako zvaunoda!